I-Lazy24 - Iflethi ELUHLAZA - I-Airbnb
I-Lazy24 - Iflethi ELUHLAZA
Iflethi eluhlaza Ime kumgangatho wokuqala. Yiflethi okanye indlu ekwicomplex eyi-60 m2 enokuhlukaniswa ibe ziiflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezimbini ezizimeleyo. Iflethi nganye esecaleni inendawo yayo yokungena, ityeya enkulu, ikhitshi elinento yonke negumbi lokuhlambela elikhulu. Iflethi eluhlaza ligumbi elikhulu lokuhlala elinekhitshi, amagumbi okulala, igumbi lokuhlambela nekona yeTV. Iflethi eluhlaza yindawo entle yezibini ezinomntwana.
IStankowice yindawo yokuhlala yakudala enabantu abahlala kuyo kangangeenkulungwane ezimbalwa basebenzele umnikazi weCzocha Castle, engekho kude kangangeekhilomitha eziyi-1,5. URengensdorf (owayekade eli gama laseJamani ledolophana esebenza kwi-Peak II) yayiyilali eneevenkile ezimbini zabantu abamnyama, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, iivenkile zokutyela ezimbini kunye nendlu yeentlanganiso nezolonwabo. Emva kwemfazwe, ilali yahlaziywa yaza yafakwa abahlali abatsha. Abantu abahlala apha namhlanje ngabathandiweyo kunye noomakhulu beentsapho abaye bafudukela kule ndawo. Namhlanje, akukho venkile yabantu abamnyama, nayiphi na indawo yokubhaka okanye ivenkile yokutyela kodwa indlu esedolophini yokudibana kunye nezolonwabo isekhona kwaye ineepati zokudanisa ezigqwesileyo kuyo yonke le ndawo. IStanowice yilali emangalisayo, uhlobo lwesanti phakathi kwehlathi elikhulu eligcwele izilwanyana namakhowa, namachibi amabini enziwe yindoda ekuqaleni kwenkulungwane: iLubanskie Lake kunye neZlotnickie Lake. Ngenxa yendawo ekuyo kunye nobume bomhlaba wayo, le ndawo ininzi onokubonelela ngayo. Ehlotyeni, yindawo entle xa kuthethwa ngokuhamba, ukubaleka, ukuhamba ngebhayisekile, ukuqubha nokuhamba ngephenyane. Ebusika, inika amathuba amaninzi okutyibilika ekhephini (iJakuszyce – enye yezona ndawo zibalaseleyo eYurophu zokuziqhelanisa nalo mdlalo), ukutyibilika ekhephini nokutyibilika ekhephini (i-gondola ivuliwe ukususela ekuseni ukuya kutsho ngo-11 ebusuku, ikhephu eliveliswe yimipu yekhephu), uhambo lwehlathi (ukuhamba ngokutyibilika ekhephini), ukuloba emkhenkceni, kunye nokuqubha emkhenkceni. Kukho nezinye iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi kunezo zinxibelelene nendawo ekuyo le lali. Le nxalenye yasePoland yadluliselwa ezandleni izihlandlo ezininzi (iCzech Republic, eJamani, ePoland) kwaye ilizwe ngalinye lishiywe apha ngendlela yenkcubeko kwaye ngexesha elinye ulwimi lwalo, amasiko, iincwadi, izakhiwo, ukutya kunye nomculo. Ukusondela komda weCzech (iikhilomitha eziyi-10) kunye nomda waseJamani kwenza kube lula ukubona iindawo, iinkcubeko kunye namasiko ahlukahlukeneyo kwiintsuku ezimbalwa. Yintoni enokuba nomtsalane ngakumbi?